Itoobiya oo gaashaanka u daruurtay eed ay Amnesty u soo jeedisay | Berberanews.com
Home WARARKA Itoobiya oo gaashaanka u daruurtay eed ay Amnesty u soo jeedisay
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sheegtay warbixinta ay soo saartay Hay’adda Amnesty International aysan ahayn mid waafaqsan xaaladda uu dalku ku jiro isla-markaana ka fog xaqiiqada.
Warmurtiyeed ay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya soo saartay oo ay uga jawaabeyso eedda Amnesty ay Itoobiya u soo jeedisay ayey ku sheegtay “warbixintu guud ahaan iney tahay mid aan ka tarjumeyn xaaladda dalka Itoobiya uu wakhti xaadirkan uu ku sugan yahay wixi ka dambeeyey marka uu isbeddel ka dhacay Itoobiya talalabbooyinka siyaasadeed iyo amni ee ay dowladda qaadday, warbixintuna ay tahay mid hal dhinac u janjeerto”.
Itoobiya waxay sheegtay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee warbixinta lagu xusay haddii ay u jiraan sida warbixinta Amnesty lagu sheegay dowladda iney u saareyso guddi madax bannaan oo soo baara.
Goobaha warbixinta lagu sheegay iney xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhaceen dadaallada xasilooni iyo amni looga soo dabbaalayey iney iska kaashadeen dowladda dhexe iyo dowlad deegaannada isla-markaana si buuxda looga qayb geliyey ururrada bulshada iyo hoggaanka diimaha.
Wasaaraddu waxaa kale oo ay sheegtay ciidamada gaashaan dhigga, booliska federaalka iyo ciidamada kale ee ammaanka ee deegaannada ay Amnesty sheegtay iney ka dhaceen xadgudbyada xuquuqda aadanaha howlgallada sharciga iyo kala dambeynta ay ku soo celinayeen in si weyn loogu ammaanay.
Wasaaradda oo jawaabta ay Amneysty siisay sii wadato waxay tiri dhibaatooyinki iyo dagaallo beeleedyadii dalka Itoobiya qaybahiisa kala duwan ka dhici jiray in haatan la xalliyey, balse dhibaatooyinka Amnesty ay sheegtay ay yihiin kuwa ay sababeen falal sharci darra ah oo ay sameeyeen kooxo hubeysan oo dalka qas ka wada.
Amnesty waxay warbixinteeda ku sheegtay deegaannada Amxaarada iyo Oromada iney xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ugu badan ay ka dhaceen.
Labadaasi deegaan oo ah halka ay ka soo billowdeen kacdoonnadi shacabka ee keenay inuu dalka Itoobiya isbeddel siyaasadeed uu ka dhasho.
Ugu dambeyn, wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya warmurtiyeedkeeda waxay ku soo gabagabeysay warbixinta Amneysty ay soo saartay iney tahay mid xaqiiqda ka fog oo aan ka tarjumeyn dhab ahaan waxa ka socda gudaha dalka itoobiya.
Warbixinta ay Amnesty ka soo saartay dalka Itoobiya ayey cinwaan uga dhigtay “Xadgudubyada ay ciidamada ammaanka Itoobiya ka geysteen deegaannada Oroamada iyo Amxaarada”.
Waxayna hay’adda Amnesty international ay Ra’isal wasaaraha Itoobiya ugu baaqday inuu amar ku bixiyo in si deg deg ah loo joojiyo dilalka sharcidarrada ah, xarig wdareedka, barakicinta qasabka ah iyo burburka hantida shacabka loo geysta.
Previous articleHargeysa: Hooyo 4 Carruura ku Weyday Dab ka Kacay Gurigeeda
Next articleSomaliland: Xukuumadda oo soo afjartay Jabhad la magac baxday Xaqdoon.